“Madaxweynuhu wuu Caafimaad-qabaa” Afhayeenka Madaxweynaha Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA “Madaxweynuhu wuu Caafimaad-qabaa” Afhayeenka Madaxweynaha Somaliland
“Madaxweynuhu wuu Caafimaad-qabaa” Afhayeenka Madaxweynaha Somaliland
Hargeysa(Berberanews):- Madaxtooyada Somaliland, ayaa sheegtay in Caafimaadka Madaxweyne Axmed-Siilaanyo fiican yahay, welina uu ku sugan yahay dalka Imaaraadka Carabta oo uu Safar Shaqsi ah iyo mid Shaqaba ku joogay tan iyo 21-ka bishii Ramadaan, waxna aanay ka jirin in xaaladdiisa Caafimaad liidato.
Afhayeenka Madaxweynaha Xuseen-Dayr oo Warbaahinta qaarkeed kula hadlay Arbacadii Maanta magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo uu joogay, waxa uu ku sheegay inaanay waxba ka jirin Warar ay Saraakiil Xisbiga Mucaaradka ah ee Waddani ka tirsani baahinayeen maalmihii u dambeeyey oo sheegaya in Madaxweynaha Somaliland aad u xanuunsanayo ama uu Sakaraad yahay.
Madaxweynaha Somaliland Axmed-Siilaanyo, Marwadiisa iyo Xog-hayihiisa gaarka ah iyo weliba Wasiirro Xukuumaddiisa ka tirsan, ayaa tan iyo 21-ka bishii Ramadaan Safar ku jooga magaalada Abu-Dhabai ee Imaaraadka Carabta, waxaana Afhayeenka Madaxtooyadu maalintii uu Madaxweynuhu dhoofay sheegay in Safarkiisu yahay mid Shaqsi ah oo uu Fasax Toban cisho dhan ku soo qaadan doono Imaaraadka. Balse waxa uu sheegay in Hawlo shaqo uu halkaas kula kulmay, sida hawlo ay wadeen Wasiirro halkaas ugu tegay Madaxweynaha iyo kuwo kasii horreeyey-ba.
Xuseen-Dayr oo arrimahaas ka hadlaya, waxaannu Hadalka uu u jeediyey qaar ka tirsan Weriyeyaasha, kagana hadlay Caafimaadka Madaxweyne Siilaanyo ee wakhtigan, waxaannu idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan Hoose ee Daawasho wacan oo wanaagsan:-
Previous articleMadaxweyne ku xigeenka Somaliland oo joojiyay xaflad laba Wasiir-kuxigeen xilka kula kal awareegi lahaayeen
Next articleMadaxweyne Silaanyo oo xaaladdiisa caafimaad ka hadlay-Daawo